Ruto iyo Raila Odinga oo dowladda ku dhaliilay talaabadii ay ku xirtay 3 senetar – Radio Damal
Ruto iyo Raila Odinga oo dowladda ku dhaliilay talaabadii ay ku xirtay 3 senetar
Ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto iyo madaxa xisbiga mucaaradka ee ODM Raila Odinga ayaa dowladda dhexe ku dhaliilay tallaabadii ay maalmo ka hor ku xirtay saddex senatar.
Mr. Ruto ayaa sheegay inay khalad tahay in ciidamada booliska loo adeegsado cabsi gelinta shacabka iyo in loo hanjabo madaxda la soo doortay.
Sido kale waxaa uu Ruto aqalka sare ku ammaanay guddiga ka kooban 12-ka xubnood ee loo xilsaaray inuu heshiis ka gaaro nidaamka in muddo ah la isku hayay.
Waxaa uu xubnaha guddigan kula taliyay inay ka yimadaan xal ay dani ugu jirto dhammaan ismaamullada.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee ODM , Raila Odinga ayaa sido kale tallaabadan cambaareeyay.
Mr .Odinga ayaa xusay inaan loo baahneyn in hannaanka ansixintiisa lagu kala qaybsamay uu noqdo mid ay isugu awood sheegtaan saraakiisha ammaanka iyo xeer-dejiyaasha.
Raila ayaa dowladda ugu baaqay inay awoodeeda xakameyso oo aynan ku dhaqaaqin tallaabooyin sababi karo dib u dhac dimuqraadiyadeed.
Waxaa uu senatarrada ugu baaqay in iyagana ay diiradda saaraan danta guud.
Siyaasiyiintan oo ka soo horjeeda nidaamka la doonayo in ismaamullada wadanka ay ku qaybsadaan dakhliga ayaa kala ah Cleophas Malala oo laga soo doortay Kakamega, senatarka Bomet Dr. Christopher Lang’at iyo dhigiisa Samburu Steve Lelegwe .
Maalinkii Isniinta ayay ahayd markii saddexda senatar laga qabtay ismaamullada Nairobi iyo Kajido waxaana mid walba la geeyay ismaamulka laga soo doortay si uu u qoro fariin ku saabsan eedeymo loo soo jeediyay in kastoo ugu dambeyn dhammaantood xabsiyada laga siidaayay.
Senatarka Samburu ayay ciidamada booliska ku eedeyeen inuu jeediyay hadalo keeni karo kicin dadweyne, dhigiisa Bomet ayaa loo haystay inuu abaabulay dhalinyaro loo dhaariyay ka qayb qaadashada dagaal beeleed halka Malala lagu eedeyay inuu jabiyay amarrada lagu xakameynaya faafitaanka cudurka COVID19.